Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maromaro ny olona naratra vokatry ny fipoahan'ny bus Rosiana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fipoahana mahery vaika no nitranga rehefa nitaingina ny bus ireo mpandeha tao amin'ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka.
Olona manodidina ny 30 no tao anaty bus tamin'ny fotoana nitrangan'ny fipoahana.
Nitranga izany fipoahana izany rehefa niditra ny bus ireo mpandeha.
Ny fipoahana dia nitranga tao amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka.
Ny fipoahana dia nitranga tao afovoan-tanànan'i Voronezh tamin'ny alakamisy hariva teo
Fiara mpitatitra mpandeha iray no nipoaka tao an-tanàna Voronezh, afovoan'i Russia.
Ny sarimihetsika mipoitra avy eo amin'ny toerana nitrangan'ny fipoahana dia mampiseho ny bus voavaky ny fipoahana.
Lahatsary mivezivezy an-tserasera dia mampiseho fa simba be ilay bus, noho ny fipoahan'ny fako, niaraka tamin'ny potipotiky ny vatany sy ny tafony.
Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia olona marobe no naratra tamin'ilay fipoahana.
Ny fipoahana dia nitranga tao afovoan-tanànan'i Voronezh tamin'ny alakamisy hariva teo.
Ny fipoahana mahery vaika dia nitranga rehefa nitaingina ny bus ireo mpandeha tao amin'ny fijanonan'ny bus teo akaikin'ny toeram-pivarotana lehibe.
Olona manodidina ny 30 no tao anaty bus tamin'ny fotoana nitrangan'ny fipoahana, hoy ny mpamily izay tafavoaka velona tamin'ny fipoahana kosa, tamin'ny haino aman-jery tany an-toerana.
Olona 12 farafahakeliny no naratra tamin'ilay fipoahana, anisan'izany ny vehivavy iray notapahina ny tongony, hoy ny fampitam-baovao avy any an-toerana, nitanisa loharanom-baovao.
Ny governora lefitry ny faritra Voronezh dia nilaza tamin'ny haino aman-jery fa ny fampihorohoroana dia tsy ao anatin'ny kinova izay nojeren'ny tompon'andraikitra tamin'ity dingana fanadihadiana ity.